Talooyin ku saabsan Hay'adaha Safarka ee Dejinta Caawinta Miiska Barnaamijka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Talooyin ku saabsan Hay'adaha Safarka ee Dejinta Caawinta Miiska Barnaamijka
Warshadaha safarka iyo soo dhaweynta waa kuwo aad u deggan, taas oo macnaheedu yahay inay u baahan tahay inay la qabsato isbedelka si dhakhso leh. Isla mar ahaantaana, waxay u baahan tahay inay diiradda saarto bixinta khibrad safar oo weyn, oo bixisa adeeg macaamiil oo ku habboon.
Isticmaalka caawiya softiweerka miiska waa hab ku habboon oo lagu hubiyo in qof kasta oo shirkaddaada ka mid ahi ku xirnaado oo uu helo taageerada tiknoolajiyadda ay u baahan yihiin.
Raadi astaamaha saxda ah
Markaad raadineyso barnaamijka miiska caawinta, waxaad u baahan doontaa inaad hesho wax bixiya astaamaha saxda ah. Hal shay oo ah in la raadiyo waa dhaqdhaqaaq iyo qaab-dhismeed, kaas oo kaa caawin doona si wax ku ool ah. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa inaad ka hesho barnaamijka dalabka moobiilka, adoo u oggolaanaya shaqaalaha inay ka adeegsadaan softiweerka qalab kasta oo ku yaal goob kasta. Waxa kale oo ay fududeyneysaa in la sameeyo howlo gudaha ah, xitaa marka la safrayo.
Wax ka qabashada Tigidhada
Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad hesho barnaamij u oggolaanaya kooxdaada IT-ga inay tikidhada si hufan uga shaqeeyaan. Waa inay u fududaato dadka isticmaala inay tikidhada sameystaan ​​markay u baahan yihiin gargaar. Tixgeli inaad ku darto saldhig aqooneed sidoo kale. Habkaas, way u fududaan doontaa dadka isticmaala inay jawaabo ka helaan su'aalaha badanaa la isweydiiyo. Markay ku jiraan barnaamijka ama bogga shabakadda, way eegi karaan qodobbadan waxtar leh. Wax kale oo loo baahan yahay in la raadsado waa aalad sheekeysi toos ah. Habkaas, shaqaalahaaga ayaa isla markiiba la xiriiri kara kooxda taageerada. Waad dejin kartaa si isticmaaleyaashu ugula xiriiri karaan habkan adoo adeegsanaya app ama shabakad internet.
Kooxda IT-ga ayaa maareyn kara mashaariicda waxna ka qaban kara arrimaha tikidhada sidoo kale. Tixgeli inaad ku darto dhowr wadiiqo oo tikidhada lagu abuuri karo. Si kasta oo aad u dooratid inaad ku dhaqaaqdo, otomatiggu waa inuu door muhiim ah ka ciyaaraa. Waa suurtagal in la habeeyo farriimaha bot-ka si looga jawaabo dhacdooyinka gaarka ah, sida ogeysiinta qof ay leeyihiin tikidh la abuuray.
Markaad isticmaaleyso otomaatiga, waad ku dari kartaa magaca qofka wax soo diray si aad shakhsi uga dhigato khibrada shaqaalaha. Waxaad markaa u dajin kartaa otomaatiga si otomaatig ah tikitka ugu siiso qof kooxda ka tirsan ama koox dad ah oo gaar ah. Markaa kooxdu waxay awoodi doontaa inay la xiriirto adeegsadaha ama dadka kale ee kooxda ka tirsan, iyagoo abuuraya mawduucyo wadahadalkan ah. Abuuritaanka dunta tigidhka ayaa ah hab fiican oo looga wada hadlo arrinta iyada oo aan la arkin.
Ku habboonaynta Codsi
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad u habeysid khibrada isticmaale qof walba oo soo gudbiya tigidh iyo inaad awood u yeelatid waxay kordhin doontaa qanacsanaanta isticmaalaha. Waxaad ubaahantahay inaad raadsato nidaam kuu ogolaanaya inaad qaabeyso isdhaafsiga labada sheybaar email iyo kuwa kujira barnaamijka. Xalka saxda ah ayaa badanaa awood kuu siinaya inaad xakameyso sida emayllada iswada dareemo oo eeg. Dabcan, xalalka badankood waxay kuu oggolaanayaan inaad habeyso saacadaha shaqada, aagagga waqtiga, iyo dhinacyada kale. Habkaas, waad joojin kartaa ama awood u siin kartaa codsi kasta ama qayb kasta adigoon ka walwalin waxqabadka nidaamka.
Raadi xal tixgeliya dhinacyada gaarka ah ee socodsiinta wakaaladda socdaalka. Qaar iyaga ka mid ah ayaa lagu dhex dari karaa barnaamijyada kale, sidaa darteed way ka fursad badan tahay ilaa xadka miiska caawinta. Iyada oo leh nidaamyo tigidh yar, waxaa suurtagal ah in la isku daro nidaamka maareynta mashruuca iyo miiska caawinta ee nidaamyada ganacsi ee kala duwan.